Shacabka Muqdisho oo ka hadlay Go’aanka dowladda Federaalka ay ku hakineyso Ganacsiga Qaadka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 1 June 2016 2 June 2016
Muqdisho ( Mareeg)-Xilli dhawaan Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in dowladdiisa ay waddo Qorshe lagu joojinayo Qaadka laga keeno dalka Kenya ayaa arrintaas waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay Shacabka Muqdisho iyo Ganacsatada Qaadka ee Muqdisho.
Qaar ka mid ah Ganacsatada Qaadka oo aan Mikrafoonka marege maanta aan la dhex qaadnay ayaa siyaabo kala duwan waxa ay uga hadleen warka ka soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya.
Waxa ay sheegeen Ganacsatada Qaadka in xilligaan aan loo baahneen in la joojiyo Ganacsiga Qaadka taas oo ay sabab uga dhigeen in dad badan Noloshooda siyaabo kala duwan ay ugu tiirsan tahay Ganacsiga Qaadka.
Kuwa kale ayaa qaba in Qaadka dhibaatooyin Bulshada uu u geysto laakiin haddii la joojinayo shaqooyin kale loo abuuro dadka ka ganacsada.
Dowladda Kenya ayaa Malaayiin dollar waxa ay ka heshaa Qaabka Soomaaliya ay u iib keento.
Soomaaliya ayaa u muuqata mid jawaab uga dhigeyso tallaabada qaadka lagu joojinayo go’aankii Kenya ay ku sheegtay in Xeryaha Qaxootiga ay Irdaha u laabeyso.